FITAOVANA MPANARA-MASO NY VIDIN'NY AMAZON 5 TSARA INDRINDRA AMIN'NY 2021 - MALEMY
Raha ny filazako hatrany amin'ny lahatsoratro rehetra dia nanova ny endrik'izay rehetra ataontsika sy ny fomba fanaovantsika izany ny vanim-potoanan'ny revolisiona dizitaly. Tsy mandeha any amin'ireo fivarotana an-tserasera mihitsy aza izahay izao fa ny fivarotana an-tserasera no zava-misy ankehitriny. Ary raha momba ny fiantsenana an-tserasera, Amazon dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo anarana lehibe indrindra eto izay azonao jerena amin'izao fotoana izao.
Ny tranonkala dia manana vokatra an-tapitrisany izay notanisan'ny mpivarotra eran'izao tontolo izao amin'ny sehatra. Ho fihazonana ny fifaninanana ho velona ary koa hahatonga ny mpanjifa liana amin'ny fotoana rehetra, ny tranonkala matetika kokoa fa tsy miovaova koa ny vidin'ny vokatra.
Amin'ny lafiny iray, ity fomba ity dia manome antoka fa ireo mpivarotra am-barotra ao Amazon dia mahazo ny tombony farany azo atao. Etsy ankilany, na izany aza, manasarotra ny toe-java-misy ho an'ny tompona orinasa kely sy ny mpanjifa izay nandoa vidiny lafo kokoa ho an'ny vokatra nefa izao mahita fa amidy amin'ny vidiny ambany kokoa izao ny vokatra.
Hiatrehana an'ity olana ity, raha mampiasa Amazon ianao na vavahady fiantsenana an-tserasera hafa - izay azoko antoka fa ampiasanao - dia tokony hametraka mpanamarin-toerana ianao amin'ny tranokala amin'ny solo-sainanao.
Ny ataon'ny mpanaraka vidiny dia ny fanarahana ny fiovan'ny vidin'ny vokatra ary koa ny fampandrenesana anao ny fihenan'ny vidiny. Ho fanampin'izany, azonao atao koa ny mandamina ny fizotran'ny fampitahana ny vidin'ny vokatra tokana amin'ny sehatra maro samihafa. Misy plethora amin'ireto mpanaraka vidiny ireto azo jerena ao amin'ny Internet.
Na dia vaovao be aza izany, dia mety hampifangaro amin'ny fotoana iray ihany koa. Amin'ny safidy marobe, ahoana ny fomba fidianao ny iray izay mifanaraka tsara amin'ny zavatra ilainao? Iza amin'izy ireo no tokony hofidinao? Raha mitady ny valin'ireo fanontaniana ireo ianao dia aza matahotra, ry namako. Tonga amin'ny toerana mety ianao. Eto aho hanampy anao amin'izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka aminao momba ireo fitaovana 5 mpanara-maso ny vidin'ny Amazon indrindra 2021 aho, izay ho hitanao eto amin'ny Internet amin'izao fotoana izao. Izaho koa dia hanome anao antsipiriany bebe kokoa momba ny tsirairay amin'izy ireo. Rehefa tapitra ny famakianao ity lahatsoratra ity dia tsy mila mahalala na inona na inona momba azy ireo ianao. Koa alao antoka fa mifikitra hatramin'ny farany. Ankehitriny, tsy mandany fotoana intsony, andao hiroboka lalina kokoa amin'ity lohahevitra ity. Aza mitsahatra mamaky.
4. boloky Penny
5. Fikarohana ala
Ireto ambany ireto dia ireo fitaovana 5 tsara indrindra amin'ny Amazon Price Tracker an'ny 2021 izay azonao jerena eto amin'ny Internet hatramin'izao. Vakio miaraka raha te hahalala fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny tsirairay amin'izy ireo.
Voalohany indrindra, ny fitaovana Amazon Tracker vidiny voalohany amin'ny 2021 izay horesahiko aminao dia antsoina hoe Keepa. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana mpanara-maso ny vidin'ny Amazon indrindra azonao jerena ao amin'ny Internet hatramin'izao. Ny mampiavaka ny fitaovana dia ny fahatongavany miaraka amina endri-javatra faran'izay tsara eo ambanin'ny lisitry ny vokatra ao Amazon.
Ho fanampin'izay, ny fitaovana dia manolotra ny mpampiasa ihany koa amin'ny graf mifampiresaka izay namboarina tamin'ny alalàn'ny fiovana maro samihafa. Tsy izany ihany, raha mieritreritra ianao fa tsy manana endri-javatra sasantsasany ny tabilao, dia azo atao tanteraka ny manampy ampio isa maromaro kokoa ao anaty toe-javatra tsy misy manahirana na ezaka be avy aminao.
Miaraka amin'izany, ny mpampiasa dia afaka mampitaha ny lisitra isaky ny vidiny iraisampirenena Amazon. Ilay fitaovana koa dia feno fiasa toa ny fametrahana azy amin'ny Facebook, mailaka, Telegram, sy ny maro hafa. Azonao atao ihany koa ny misafidy fampandrenesana fidinan'ny vidiny.
Mividy varavarankely fotsiny ve ianao amin'izao fotoana izao? Avy eo ny sisa hataonao dia mitsidika ny faritra ‘Deal’ fotsiny. Ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia manangona ny lisitry ny vokatra an-tapitrisany avy any Amazon ary manome ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny sokajy maro samihafa hisafidiananao.
Ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia miasa tsara amin'ny ankamaroan'ny malaza rehetra ary koa ny fanitarana be mpitia toa an'i Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Edge, ary maro hafa. Ho fanampin'izay, ny tsenan'i Amazon izay mifanaraka aminy dia com, .in, .au, .ca, .uk, .mx, .br, .jp, .it, .de, .fr, ary .es.
windows vaovao farany batterie tsy mamaly
Fitaovana mpanara-maso ny vidin'ny Amazon iray tsara indrindra amin'ny 2021 izay horesahiko aminao izao dia antsoina hoe Camel CamelCamel. Na eo aza ny anarana somary hafahafa, ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia mendrika ny fotoanao ary koa ny sainao. Ny fitaovana dia miasa tsara amin'ny fanarahana ny vidin'ny lisitry ny vokatra Amazon. Ho fanampin'izay, mandefa ireo lisitra ireo mivantana any amin'ny boaty mailakao koa izy ireo. Ny fanampin'ilay mpitety tranonkala dia atao hoe Camelizer. Ny add-on dia mifanaraka amin'ny saika ny malaza rehetra ary koa ny fanitarana be mpitia indrindra toy ny Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ary maro hafa.
Ny fizotry ny asa an'ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia mitovy amin'ny an'i Keepa. Amin'ity fitaovana ity dia afaka mitady izay vokatra tadiavinao ianao. Amin'ny maha fomba hafa anao dia azonao atao ny mampiasa ny add-on-n'ny browser hijerena ireo sary momba ny tantaram-bidy izay ho hitanao eo amin'ny pejin'ny vokatra ihany. Ho fanampin'izany, azonao atao ihany koa ny misafidy fampandrenesana Twitter raha sanatria misy ny fihenan'ny vidin'ny vokatra tadiavinao efa ela izao. Ny endri-javatra dia antsoina hoe Camel Concierge Service.
Ny sasany amin'ireo endri-javatra mahavariana hafa dia misy ny sivana amin'ny sokajy iray, ny fahaizana mikaroka vokatra amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana ny URL Amazon ao amin'ny bara fikarohana, ny toerana Amazon, ny firindrana wishlist, ary maro hafa. Na izany aza, tsy misy sivana izay miorina amin'ny vidiny ary koa ny isan-jato isan-jato. Ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia ahafahanao mahita ny avo indrindra sy ny vidiny ambany indrindra amin'ny endritsoratra mena sy maitso. Vokatr'izany dia afaka mamorona ny sainao mora foana ianao raha mieritreritra fa mety aminao na tsia ny vidiny ankehitriny.
Misy ihany koa ny hitsin-dàlan'ity fitaovana ity amin'ny Android na koa Rafitra fiasa iOS . Ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia misy any amin'ny firenena maro izay misy an'i Etazonia, UK, Italia, Spain, Japan, China, Germany, France, Canada, ary maro hafa.
tsy mifanaraka amin'ny fizahana vaovao farany
Sintomy ny Camel CamelCamel
Mangataka aminareo rehetra aho izao mba hamindra ny fifantohanareo mankamin'ny fitaovana mpanara-maso ny vidin'ny Amazon manaraka tsara indrindra amin'ny 2021 izay ho hitanao eo amin'ny Internet hatramin'izao. Ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia antsoina hoe PriceDrop, ary mahavita tsara ny asany ny asany.
Ny fanitarana dia mandeha tsara amin'ny ankamaroan'ny mpitety rehetra toa an'i Google Chrome, Mozilla Firefox, ary maro hafa. Handray fampandrenesana amin'ny vokatra manokana avy any Amazon ianao. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mijery hatrany ny vidin'ny vidiny any aoriana. Izy io kosa dia manome antoka fa hitahiry betsaka araka izay tratra ianao eo am-piantsenana. Ny fitaovana dia iray amin'ireo mpanara-maso ny vidin'ny Amazon amin'ny fotoana tena haingana izay mampitandrina anao ny amin'ny fiovan'ny vidiny isaky ny 18 ora koa.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fampiasana ny DirectX Diagnostic Tool amin'ny Windows 10
Ny hany ilainao hatao hampiasana azy dia mametraka ny extension amin'ny browser-nao. Raha vantany vao vita izany, dia azonao atao ny mandeha mankany amin'ny pejy manokana momba ny vokatra tianao hijerena ny vidiny ao amin'ny tranokala Amazon. Aorian'izay, azo atao tanteraka ny manomboka manara-maso ny vidin'ilay vokatra voalaza. Raha vantany vao misy ny fihenan'ny vidiny, ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia handefa fampandrenesana ao amin'ny tranokala ampiasainao. Ho fanampin'izany, ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia mahatonga anao hahafahanao manara-maso ihany koa ny vidin-javatra amin'ny ho avy. Tsy izany ihany fa noho ny fanampian'ity fitaovana ity dia azo atao tanteraka ny mandinika ny lisitry ny vokatra arahianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fampidirana ny menio milatsaka vidiny. Ity dia, tsy isalasalana, tombony lehibe ho an'ny mpampiasa marobe - raha tsy izy rehetra.
Ankehitriny, ny fitaovana mpanara-maso ny vidin'ny Amazon manaraka tsara indrindra amin'ny 2021 izay horesahiko aminao dia antsoina hoe Penny Parrot. Ny fitaovana fanaraha-maso ny vidiny dia feno izay azo lazaina fa ny tabilao mampihena ny vidiny tsara indrindra isaky ny mpanara-dia ny tantaran'ny vidin'ny Amazon izay hita eo amin'ny Internet hatramin'izao.
Ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia tsy milamina, mirindra, madio, ary manana endri-javatra kely kokoa noho ny ao aminy, saingy ireo izay tena ilaina indrindra. Ny interface interface (UI) dia minimalistic, madio ary mora ampiasaina. Izay manam-pahalalana ara-teknika kely na izay vao manomboka mampiasa ity fitaovana ity dia afaka mitantana azy io tsy misy manahirana na ezaka be avy amin'izy ireo. Azo antoka fa tombony lehibe ho an'ny mpampiasa rehetra io. Ireo fiasa dia voatanisa amin'ny fomba hita maso sy sahisahy ihany koa. Misy ihany koa ny hitsin-dàlana ho an'ireo mpampiasa iPhone izay ahitan'izy ireo mora foana ny tantaran'ny vidin'ny vokatra manokana iray any Amazon.
Eo amin'ny lafin'ny fihenan-danja, ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia tsy mifanaraka amin'ny tranokalan'ny USA ihany, na Amazon.com. Ho fanampin'izay, mila miditra ihany koa ianao amin'ny fampiasana ilay fitaovana mpanara-maso ny vidin'ny Amazon maimaim-poana.
Ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia manohana saika ny fanitarana rehetra amin'ny browser indrindra toy ny Google Chrome, Internet Edge, Opera, Mozilla Firefox, ary maro hafa. Na izany aza, tsy mifanaraka amin'ny Amazon.com fotsiny izany fa ny tranokalan'ny USA an'ny orinasa.
Sintomin'i Penny Parrot
Farany fa tsy ny kely indrindra, ny fitaovana farany mpanara-maso ny vidin'ny Amazon an'ny 2021 izay horesahiko aminao dia antsoina hoe Jungle Search. Mety tsara ilay anarana raha jerena ny ala goavan'ny vokatra azo alaina ao Amazon. Ny fizotran'ny asa amin'ny fitaovana mpanara-maso ny vidiny dia tsotra ihany, izay ahafahanao mankany Amazon raha tsy amin'ny fikapihana ny bokotra fidirana.
Vakio ihany koa: Rindrambaiko Antivirus 10 tsara indrindra ho an'ny Android
windows modules installer mpiasa fampiasana kapila ambony
Noho ny fanampian'ity fitaovana mpanara-maso ny vidiny ity dia afaka mitady izay vokatra tadiavinao ianao araka ny sokajy misy azy ary koa amin'ny fampiasana endrika fikarohana tsotra. Ny hany mila ataonao hampiasa ny endrika karoka dia ny fampidirana ny anaran'ny vokatra, ny kely indrindra ary ny vidiny faran'izay betsaka, ny anaran'ny orinasa mpamokatra ny vokatra, ny hevitry ny mpanjifa ary ny farafahakeliny ary koa ny isan-jato faran'izay betsaka.
Raha vantany vao mifanaraka amin'ny fikarohana ianao, ny tranokala Amazon dia hisokatra amin'ny takelaka vaovao ary koa takelaka misaraka izay haseho ireo vokatra araka ny masonkarena fikarohana nomenao. Tsy misy add-on navigateur azo ampiasaina ho an'ity fitaovana mpanara-maso ny vidin'ny Amazon ity koa.
Ampidino ny fikarohana ala
Ka ry zalahy, efa tonga tany amin'ny faran'ny lahatsoratra isika. Tonga izao ny fotoana famonosana azy. Manantena mafy aho fa ny lahatsoratra dia nomena ny sanda tena nilainao mafy ary mendrika ny fotoanao sy ny sainao. Ankehitriny rehefa manana ny fahalalana tsara indrindra azo atao ianao, dia alao antoka fa hampiasa izany amin'ny fomba tsara indrindra mety ho hitanao. Raha sendra manana fanontaniana manokana ao an-tsaiko ianao, na raha mieritreritra ianao fa tsy nahita teboka manokana aho, na raha tianao ny hiresahako zavatra hafa iray manontolo dia mba ampahafantaro ahy. Faly kokoa aho ny manery ny fangatahanao ary koa mamaly ny fanontanianao.
Windows 10 fanavaozana mihantona amin'ny 99 isan-jato
chromecast tsy mandeha amin'ny solosaina finday
Tsy nisokatra ny rindrambaiko windows
wifi mahazo tapaka matetika Windows 10
fanavaozana ny windows 10 nikatona
ny sonia niomerika ho an'ity rakitra ity dia tsy azo hamarinina